MUQDISHO, Soomaaliya - Cabdiraxmaan Cabdishkuur ayaa si adag uga horyimid go'aankii maanta kasoo baxay Maxkamadda Racfaanka gobolka Banaadir kadib shir jaraa’id oo uu ku qabtay hoyga uu ka degan yahay Muqidsho.
Go'aanka Maxkamadda ee isaga uga mamduucday dalka inuu uga baxo safarada dibadda ayuu ku tilmaamay mid aan la aqbali karin, oo sharci darro ah.
Siyaasiga ayaa sheegay in Dacwadda uu Xeer ilaaliyaha Guud ee Qaranka ka furay Maxkamadda Racfaanka ay tahay mid siyaasadeysan oo la doonayo in lagu xanibo dhaqdhaqaaqiisa siyaasadeed.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa ku eedeeyay Villa Soomaaliya inay tahay meel laga soo abaabulo dilalka qorsheysan iyo Maxkamadeynta Siyaasiyiinta aan ku fekerka ahayn, ee mucaaradka ku ah.
Go'aanka Maxkamadda ayaa dhacay isagoo Cabdiraxmaan Cabdishakuur ka maqan fadhigii maanta, kadib markii uu qaadacay xalay, mana jirin qareenno uu u wakiishay inay u matalaan dhageysiga.
Maxkamadda Racfaanka ayaa laashay qaraarkii Maxkamadda gobolka Banaadir ee ahaa in aan racfaan laga qaadan karin qaraarkeedii ay ku fasaxday Cabdiraxmaan Cabdishakuur bishii lasoo dhaafay.
Xeer Ilaalinta Qaranka ayaa la siiyay mudo 90 cisho oo uu kusoo dhameystirayo baaritaankiisa ku aadan Kiiska lagu soo oogay Cabdiraxmaan Cabdishakuur, oo qaran-dumis iyo qiyaanno qaran ah.
Qareenno kamid ah Maxkamadda gobolka Banaadir oo gaaraya 8 ayaa lagu ganaaxay lacag gaaraysa $2,000 midkiiba, iyadoo qaarkood shaqada laga joojiyo kadib markii ay isku dayeen inay difaacaan CC Shakuur.
Hoos ka akhri War Saxaafadeedka Xisbiga Wadajir:
Mooshinka ayaa dhaliyay khilaaf xooggan iyo kala qeybsanaan u dhaxaysa Madaxda sare...
Xisbiyo ka digay in dalka la geliyo xasilooni darro siyaasadeed
Soomaliya 26.12.2017. 23:53